Qorshaha Medicare ee Su'aalaha La Weydiiyo - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Qorshayaasha Medicare Advantage Plans > Qorshaha Medicare Su'aalaha La Weydiiyo
Qorshaha Medicare Su'aalaha La Weydiiyo
Raadi jawaabaha su'aalaha guud ee Medicare.
Hel Jawaabaha Aad U Baahan Tahay
Haddii aad xubin cusub tahay ama haddii aad nala joogtay in muddo ah, waxaa laga yaabaa inaad su'aalo ka qabtid caymiskaaga caymiska 'CHPW Medicare Advantage'. U isticmaal boggan inuu yahay ili aad ka heli karto jawaabaha su'aalaha guud.
Qorshee Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo
Waa maxay Qorshaha Faa'iidada Medicare?
Qorshayaasha Medicare Advantage waxay isku daraan Qaybaha A iyo B ee Medicare-ka asalka ah waxayna bixiyaan waxtarro dheeri ah, oo ka hooseeya hal kaar. Shirkadaha caymiska gaarka loo leeyahay, sida CHPW Medicare Advantage, waxay bixiyaan qorshayaashan. Intaas waxaa sii dheer, waxay bixiyaan caymis dheeri ah sida ilkaha, aragga, maqalka iyo dawooyinka dhakhtarku qoro. Qorshaha Faa'iidada, waxaad leedahay nabadgelyo daryeel caafimaad oo badan. Waxaad xadidday lacag-bixin ama lacag-caymis caymis ah oo loogu talagalay waxyaabaha sida booqashooyinka dhakhtarka caadiga ah iyo xaddidnaanta sannadlaha ah ee kharashaadkaaga daryeelka caafimaad ee jeebka. Tan macnaheedu waa marka aad bixiso xadka ugu badan, wax dambe ma bixinaysid. Medicare-ka asalka ah ma bixiyo xadidan. Si aad ugu qalanto Qorshaha Faa'iidada, waxaad helaysaa Qaybaha A iyo B ee Medicare-ka Asalka ah, waxaadna sii wadaysaa bixinta khidmadaha Qaybta B.
Ma jiraa qof ku biiri kara Qorshaha Faa'iidada Medicare?
Guud ahaan, qof kasta oo qaata Qaybaha A iyo B ee Medicare Asalka ah wuxuu xaq u leeyahay caymis dheeri ah oo ku saabsan qorshaha Faa'idada. Waxaa jira shuruudo yar hadaad rabto inaad iskaqorto qorshaha Medicare Advantage. Waa inaad:
In lagu qoro labada qeyb ee Medicare Qeybta A iyo Medicare Qeybta B (hadaad isqorto waxaad heli laheyd kaarkaaga Medicare cas, cadaan, iyo buluug)
Ku noolow aagga adeegga ee qorshaha (kaas oo ku saleysan degmada aad ku nooshahay - oo aan ahayn gobolka aad deggan tahay)
Ma qabo cudurka kelyaha ee heer-dhamaadka ah (ESRD).
Waa maxay Medicare?
Medicare waa barnaamij caymis federaal ah oo loogu talagalay dadka jira 65 iyo ka weyn, dadka da'da yar ee naafada ah iyo kuwa qaba Cudurka Kelyaha ee End Stage. Markaad gaarto 65, waa inaad iska qortaa caymiska Medicare toddobada bilood ee ku xeeran dhalashadaada 65aad. Haddii aadan isqorin caymiska inta lagu jiro waqtigaas laakiin aad xaq u leedahay Medicare, waa inaad bixisaa ganaax. Waxbadan ka baro isqorista halkan.
Miyaad lumisay caymiskaaga Medicare ee Asalka ah markaad isqorto qorshaha Faa'iidada?
Maya. Qorshe bixiyahaagu wuxuu la wareegi doonaa qaar ka mid ah hababka maamulka si loo hirgeliyo dheefahaaga Medicare; hase yeeshe, ma waayi doontid Medicare-kaaga Asalka ah. Waa inaad sii wadaa inaad bixiso khidmaddaada Medicare Qaybta B. Qorshaha faa iidada ayaa sare u qaadaya caymiskaaga. Waxay ku shaqaysaa Medicare-ka Asalka ah, laakiin ma beddelayso.
Waxaan ubaahanahay caawimaad xulashada qorshe, sideen ku heli karaa macluumaad dheeraad ah?
Kahor xulashada qorshe, waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso waxyaabaha soo socda:
Kharashaadka, caymiska, caymiska dawada dhakhtarku qoro, dhakhtarka iyo doorashada cosbitaalka, tayada daryeelka, safarka.
Hubso in qorshaha aad dooratay uu u shaqeeyo miisaaniyaddaada iyo baahiyahaaga daryeelka caafimaad.
La soco qorshayaasha la heli karo ee aan bixinno. Haddii aad weli su'aalo qabto, la xiriir khubaradayada caafimaadka ee shatiyeysan. Waxay kaa caawin karaan kajawaabida wixii su'aalo ah ee aad ka qabto caymiska waxayna kaa caawin karaan xulashada qorshe ku saleysan caymiska aad u baahan tahay. Wixii su'aalo kale ama macluumaad ah, fadlan kala xiriir adeegga macaamiisha taleefan ama emayl.
Waxaan horeyba uqaatay qorshe, laakiin baahiyadayda caafimaad ayaa isbadalay. Ma beddeli karaa xulashooyinka qorshaha?
Haa, laakiin kaliya xilliyada qaarkood ee sanadka. Inta lagu jiro Muddada Diiwaangelinta Furan (laga bilaabo Oktoobar 15 illaa Diseembar 7) waad ka wareegi kartaa hal Qorshe oo ah Faa'iidada Medicare una beddela mid kale.
Haddii aad rabto inaad dib ugu noqoto Medicare-ka asalka ah, waad sameyn kartaa inta u dhexeysa 1-da Janaayo ilaa Febraayo 14.
Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan caymiska, la hadal mid ka mid ah khubaradayada caafimaad. Waxay kaa caawin karaan inaad hesho caymis ku habboon baahiyahaaga caafimaad.
Maxay yihiin qaybaha kala duwan ee Medicare maxaase daboola?
Medicare-ka Asalka ahi wuxuu si gooni ah u daboolayaa laba qaybood oo ka mid ah daryeelkaaga caafimaad: Qaybta A (caymiska cisbitaalka) iyo Qaybta B (caymiska caafimaadka). Qaybta D waa ikhtiyaari oo waxaa ku jira caymiska dawada dhakhtarku qoro.
Qaybta A waxay daboolaysaa joogitaanka isbitaalka bukaan-jiifka, xannaanada xarun daryeel caafimaad oo xirfad leh, daryeelka cisbitaalka, iyo qaar ka mid ah daryeelka caafimaadka guriga.
Qaybta B waxay kahadashaa adeegyada dhakhaatiirta qaarkood, daryeelka bukaan socodka, agabka caafimaadka, iyo adeegyada kahortaga.
Qaybta D waxay ku dareysaa caymiska dawada dhakhtarku qoro.
Qorshayaasha Medicare ee Faa'iidada waxaa loo kala qaadey inay yihiin Qeybta C. Qorshayaashani waxay isku darayaan Qeybaha Medicare-ka ee A iyo B waxayna ku siinayaan faa'iidooyin dheeri ah, dhammaantoodna waxay ka hooseeyaan hal kaar. Qorshooyinka faa iidooyinka badankood sidoo kale waxaa kujira caymiska Qaybta D. Qorshayaasha faa iidadu waxay ku siinayaan caymis ka badan kan Medicare-ka ah oo keliya.
Ma waxbaa iska beddelaya qorshahayga?
Wixii isbeddel ah ee ku yimaada qorshaha waxaa lagu sharaxay Ogeysiiska Sannadlaha ee Isbeddelka (ANOC) kaas oo lagu soo diro adiga sannad walba. Macluumaadka sidoo kale waxaa laga heli karaa bogga faahfaahinta qorshaha.
Ka waran haddii aan qorsheynayo inaan shaqeeyo wixii ka dambeeya da'da 65?
Haddii aad wali shaqeyneyso markaad dhaaftay da'da 65, waxaad dib u dhigi kartaa isqorista Medicare. Si kastaba ha noqotee, waa inaad weli caymis ku leedahay caymiskaaga caafimaad ee loo shaqeeyahaaga. Waxaad xaq u leedahay inaad dib u dhigto diiwaangelinta illaa shaqadaada ama caymiskaagu dhammaanayo (hadba midda ugu horreysa ee dhacda.) Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ku sii wado caymiska qorshaha loo-shaqeeyahaaga ama aad iska qorto Medicare
Waa maxay AEP?
Waqtiga Isdiiwaangelinta Sanadlaha ah (AEP) waa waqti ka bilaabma Oktoobar 15 illaa Diseembar 7, marka ka-faa'iideystayaasha Medicare ay beddeli karaan caymiskooda. Tusaale ahaan, qof ayaa laga yaabaa inuu ku daro ama hoos u dhigo caymiska, ama beddelo Qorshayaasha Medicare.
Miyay tahay inaan beddelo caymiskayga inta lagu jiro AEP?
Maya. Haddii aad ku faraxsan tahay qorshahaaga oo baahidaada caafimaad aysan waxba iska beddelin, looma baahna inaad wax ka beddesho inta lagu jiro AEP. AEP waxaa loogu talagalay isbadalada ikhtiyaariga ah sida isqorista qorshe sifiican ula jaan qaadaya baahiyahaaga. Haddii aadan hubin inaad u baahan tahay caymis kala duwan ama aad rabto inaad sahamiso xulashada qorshooyinkaaga, la hadal mid ka mid ah khubaradayada caafimaadka ee rukhsadda haysta.
Sideen ugu qoraa qorshe inta lagu jiro barnaamijka AEP?
Waxaa jira qaabab badan oo loogu qoro qorshe cusub ama wax looga beddelo caymiskaaga.
Kooxdayadu waxay diyaar yihiin toddobo maalmood usbuucii laga bilaabo 8:00 subaxnimo ilaa 8:00 fiidnimo, si ay uga jawaabaan su'aalahaaga oo ay kaaga caawiyaan inaad isqorto. Naga soo wac 1-800-944-1247 (TTY: 711).
Haddii aad ka fekereyso inaad beddelato qorshooyinka ama aad ku darto xulashooyinka caymiska, waxaad jadwal u sameyn kartaa dib u eegista qorshaha mid ka mid ah khubaradayada. Waxay ka jawaabi karaan su'aalo kasta oo aad qabtid waxayna kaa caawin karaan xaqiijinta inaad helayso xaddiga saxda ah ee caymiska.
Waxaad iska qori kartaa khadka tooska ah adoo adeegsanaya foomkeena arjiga ee internetka.
Ma ka beddeli karaa qorshahayga Medicare meel ka baxsan AEP?
Waxaa laga yaabaa in. Waxaa jira dhacdooyin gaar ah oo kaa dhigaya inaad xaq u leedahay inaad beddesho qorshooyinka ka baxsan muddada Diiwaangelinta Sannadlaha ah. Tusaale ahaan, haddii aad hawlgab noqoto 65 ka dib oo aadan ka helin caymis shaqo-bixiyahaaga, u guurto adeeg cusub, ama aad gaarto 65, waxaad awoodi doontaa inaad wax ka beddesho qorshahaaga.
Dhacdooyinkan nolosha ayaa dhici kara wakhti kasta inta lagu jiro sanadka, sidaa darteed bixiyeyaasha caymiska ayaa sameyn kara waxyaabo ka reeban. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ogtahay inaad rabto inaad beddesho caymiska, AEP waxay u badan tahay waqtiga ugu fiican ee sidaas la sameeyo.
Haddii aad weli su'aalo qabtid, fadlan la xiriir adeegga macaamiisha si ay kaaga caawiyaan 1-800-942-0247 (TTY Relay: 7-1-1). Kooxdayada saaxiibtinimada iyo deegaanka waxay diyaar yihiin 8:00 subaxnimo ilaa 8:00 fiidnimo, toddobo maalmood usbuucii.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Sebtember 16, 2019